Ciidamada Turkiga oo gudaha u galay Suuriya - BBC News Somali
Image caption Ciidamada Turkiga ayaa galay aagga "bariga webiga Furaat"
Milateriga Turkiga ayaa billaabay duulaan dhulka ah oo uu ku beegsanayo waqooyiga Suuriya, saacado kadib markii ay diyaaradihiisa iyo madaafiicda goobta duqeeyeen deegaanno ay ka taliyaan xooggaga Kurdiyiinta.
Ciidamada Turkiga oo kaashanaya jabhado Suuriyaan ah ayaa galay aagga "bariga webiga Furaat" sida ay sheegeen saraakiil Turki ah.
Madaxweyne Rajab Tayib Erdogan ayaa sheegay in ujeedada hawlgalkan ay tahay samaynta "aag ammaan ah" oo laga sifeeyay xooggaga Kurdiyiinta, deetana la dejin doono qaxootiga Suuriya.
Turkiga oo PKK ku eedeeyay qarixii Istanbul
Trump oo hanjabaad kulul u diray Turkiga
Xooggaga Kurdiyiinta ee garabka u ahaa Maraykanka ayaa wacad ku maray inay iska caabin doonaan duulaankaasi.
Britain iyo Faransiiska ayaa codsaday in Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay uu kulan degdeg ah ka sheego duulaanka, halka madaxa guddiga Yurub, Jean-Claude Juncker uu ugu baaqay Turkiga inuu "hakiyo hawlgalka milateri".
Xoghayaha guud ee NATO, Jens Stoltenberg ayaa sheegay in walaaca ammaan ee Turkigu muujiyay uu yahay "mid sax ah" balse uu filayo in dalkaasi uu "is xakamayn doon".
Image caption Shacab ka barakacay duulaanka Turkiga
Laba kamid ah xeryaha lagu hayo dadkaasi - Roj iyo Ceyn Cisa - ayna ku jiraan qoysaska ragga la tuhunsan yahay ayaa ku yaal aagga ammaan ee uu Turkiga samayn rabo.